Voaràra ny Fanaovana Fihetsiketsehana Ao Thailandy, Saingy Nataon’Ireo Mpianatra izany Hanohanana ny Hetsika Ao Hong Kong · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Oktobra 2014 7:36 GMT
Ity sary ity, izay niparitaka fatratra tao amin'ny Facebook, dia mampiseho mpianatra Thailandey maneho firaisankina amin'ireo mpianatra manohana ny demaokrasia ao Hong Kong
Nampifandraisin'ny famoretana, nihantsy ny fandraràna fihetsiketseham-bahoaka apetraky ny fitondrana miaramila ny vondrona mpianatra Thailandey iray ary nitangorona teo anoloan'ny Masoivoho Shinoa ao Bangkok mba haneho ny firaisankinan'izy ireo amin'ireo mpianatra mpanao fihetsiketsehana manohana ny demaokrasia ao Hong Kong.
Nikarakara ny fihetsiketsehana ho fanohanana ny hetsika manohana ny demaokrasia ao Hong Kong, izay manohitra ny fanapaha-kevitry ny governemanta Shinoa hamotopototra ireo kandidà mifaninana amin'ny fifidianana ho mpitarika fara-tampon'i Hong Kong amin'ny taona 2017 ireo mpianatra mpanao fihetsiketsehana izay voalaza fa mpikatroka manohitra ny fanonganam-panjakana avy ao amin'ny Foiben'ny Mpianatra Thailandey hoan'ny Demaokrasia (TSCD).
Niparitaka fatratra manerana ny media sosialy, tahaka ilay sary nalefa tao amin'ny Facebook ny sarin'ireo mpanao fihetsiketsehana izay nitangorona tao ivelan'ny kaonsilà nandritra ny adiny iray latsaka.
Manana dikany lehibe ny hetsik'ireo mpianatra ireo, miseho amin'ny fotoana izay nisamborana sy nanagadran'ny fitondrana miaramila ireo mpikatroka an-jatony manohana ny demaokrasia sy mpanao politika ary mpampianatra eny amin'ny oniversite noho ny fiezahan'ny fitondrana miaramila hanampenam-bava ny mpanohitra. Hatramin'ny fanonganam-panjakana tamin'ny volana Mey, nanangana ny kolontsain-tsivana Orwellianasy fampitahorana amin'ny fandraràna ny fihetsiketseham-bahoaka sy ny fihetsiketsehana ara-politika, manakana ireo vondrona manohana ny demaokrasia tsy hidina an-dalambe, ny miaramila.
Misy ny rohy voajanahary eo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana ao Hong Kong sy ny mpiara-dia amin'izy ireo ao Thailandy . Araka ny filazan'ny habaka amin'ny teny anglisy Khasood, nanebaka ny fitondrana miaramila ny iray amin'ireo mpianatra, mamadika ho fanesoana ilay hira malaza ho nosoratan'ny lehiben'ny fitondrana miaramila mampiady hevitra sy praiminisitra ankehitriny Prayuth Chan-ocha: “Hanatanteraka araka izay nampanantenainy i Shina. Mangataka fotoana vitsy fanampiny izahay, ary hiverina i Hong Kong mahafinaritra “.
Tsy tahaka ireo mpiara-belona amin'izy ireo izay mibodo ny distrikan'ny fandraharahana ao Hong Kong, efa niaina tanatin'ny fitondrana demaokratika ny mpianatra Thailandey, ary nihalehibe nandritra ny fitondrana demaokratikan'i Thaksin Shinawatra, mpitondra voalohany indrindra voafidy ara-pomba demaokratika tao Thailandy nahavita fe-potoam-piasana feno iray. (Na dia voahongana tamin'ny taona 2006 aza i Thaksin ary voampanga ho nandroba [volam-panjakana]. Mialokaloka any amin'ny firenen-kafa izy mba hisorohana amin'ny fanagadrana). Manoloana ny fanitsakitsahana mahazatra mihatra amin'ny demaokrasia sy ny fanjakan-dalàna vokatry ny fanonganam-panjakana vao haingana indrindra, niaina mivantana izany hoe fikorosy fahan'ny demaokrasia mankany amin'ny fitondrana tsy refesi-mandidy izany ny vahoaka Thailandey.
Azo antoka fa hiteraka fanontaniana goavana mikasika izay hitranga manaraka eo amin'ny vahoakan'ny Thailandey ny fihetsiketsehana ao Hong Kong. Mety handrenesana bebe kokoa ny fitakiana isian'ny fitantanana demaokratika ao amin'ny firenena ve ireo fihetsiketsehana tontosain'ireo mpianatra be herim-po ireo?